Sunday, 26 Jan, 2020 3:41 PM
नेपालको पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवा दश वर्ष पुरा गरेर एघारौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । क्यासलेस अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दै स्थापना भएको इसेवाले यो एक दशकको अवधिमा निकै ठुलो सफलता पनि पाएको देखिन्छ । कलेज पढ्ने तीनजना युवा मिलेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सफट्वेयर बनाउने उदेश्यले खुलेको कम्पनी हो, एफवान सफ्ट । त्यही एफवान अन्तरगतको कम्पनी हो, इसेवा । अहिले नेपालका ठुला ‘बिजनेस ब्राण्ड’का नाम लिनुपर्दा इसेवा अग्रपंतिमा आउँछ । अहिले दर्जनौ पेमेन्ट गेटवे कम्पनी आएपनि यो सेक्टरमा इसेवा पायोनियर नै हो । हामीले इसेवाको दश वर्षको यात्रा, संघर्ष र सफलता तथा भावी योजनाबारे इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटासँग कुराकानी गरेका छौँ ।
इसेवा नेपालमा स्थापना भएको दशक पुरा भइसकेको छ, समग्रमा यो दशवर्ष कस्तो रह्यो ?
दश वर्षको यात्रा हेर्दा राम्रै रह्यो भन्नुपर्छ । सुरूसुरूमा हामीलाई मानिसहरूले पत्याउँदैनथे । बैंकहरू पनि यी केटाहरूले के गर्न लागेका हुन् ? के चाहीँ चलाउने हुन् जस्ता कुरा गर्थे । इसेवाबाट बिल तिर्न सकिन्छ भन्दा पनि ‘कहाँ मिल्छ यसरी’, भन्ने खालका प्रश्न आउँथे । अर्को कुरा मानिसलाई रकम तिर्नै डर लाग्ने जस्तो थियो । तर, अहिले इसेवा भनेपछि सबैले प्रयोग गर्नुभएको छ । आम मानिसमा जे कुरा पनि इसेवाबाट गर्न सकिन्छ भन्ने छाप बसेको छ । मानिसमा प्रविधि चलाउन डर लाग्ने स्थितीबाट अहिले जहाँ समस्या त्यहाँ इसेवा छ, इसेवा नभएको ठाउँमा इसेवा चाहिन्छ भन्ने महशुस भएको छ ।
अर्को कुरा मानिसले जहाँ लाइन बस्नुपरेको त्यहाँ इसेवा सम्झन्छन् । जस्तो इपीएसमा लाइन बस्नुपर्यो, मानिसले इसेवा सम्झिए । इसेवाले त्यहाँ सेवा दियो । यस्तै अन्यत्र कतै लाइन बस्नुपर्यो भने इसेवा सम्झन्छन् । भुक्तानी गर्नलाई सजिलो भनेकै इसेवा हो भन्ने भएको छ । जसले चलाउँछ त्यसले बुझ्यो, जसले चलाउँदैन त्यसले पनि इसेवा प्रयोग गरेमा सजिलो हुन्छ भन्ने बुझेको छ । आफुले नचलाएपनि इसेवा भनेको के हो भन्ने बुझेको छ । आज हामीले ब्राण्डको हिसाबले इसेवा भुक्तानी गर्ने माध्यम हो भन्ने कुरा स्थापित गरायौँ । हाम्रो दश वर्षको मूख्य उपलब्धी यही नै हो ।
त्यसो भए यो दश वर्षमा इसेवाले मानिसको सोचाइ बदल्न सक्योे भन्दा हुन्छ ?
एकदम हो । यो दश वर्षमा मानिसको सोचाइमा नै परिवर्तन भएको हो । सुरूमा मानिसले अनलाइन भनेको छ, यो हुने हो की होइन, मेरो काम हुन्छ की हुँदैन, किन्न मिल्ने हो की होइन, के नयाँ कुरा बनाएका हुन्, भन्दै अनेक आशंका गर्थे । अहिले सब कुरा अनलाइनबाट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा सबैमा छाप बस्यो ।
कतिपय मानिसलाई रिचार्ज कार्ड नकोट्याएसम्म रिचार्ज गरेजस्तै नलाग्ने, बसमा सहचालकसँग झगडा नगरे यात्रा गरेजस्तै नलाग्ने जस्तो थियो । त्यो परम्परागत व्यवहारलाई अहिलेको अवस्थासम्म ल्याउन कत्तिको गाह्रौ रहेछ ?
सबैभन्दा गाह्रो काम नै यही हो । पहिले मानिसलाई विश्वास नभएर, नसिकेर अथवा नजानेर गर्दैनथे भने अहिले पहुँच नभएर नगर्ने हो । इसेवा चलाउने रहर सबैलाई छ । तर इसेवा कसरी राख्ने, कसरी चलाउने भन्ने ज्ञान नभएर नचलाएको हो । जसलाई ज्ञान छ, जसले चलाउँछ उसले इसेवाबाट गर्न मिल्छ की मिल्दैन भनेर सोच्दैन । इसेवाबाट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञान भइसकेको छ । तर, कतिपयमा मैले चाहीँ कसरी चलाउने भन्ने कुराको कमी हुनसक्छ । तर अहिले इसेवाबाट सहज किसिमले भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्ने सबैलाई महशुस भएको छ र उहाँहरूले पनि प्रयोग गरिरहनुभएको छ ।
यी कुरा त आम प्रयोगकर्ताको हकमा भयो, प्रयोगकर्ता भन्दा पहिले त सेवाग्राही जोडिनुपर्छ होला । सेवाग्राही तयार भएपछि मात्र प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्न मिल्ने हो । अहिले भएका मर्चेन्ट तथा सेवाग्राहीलाई अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेर मनाउन कति सहज या गाह्रो भयो ?
सेवाग्राहीको हकमा पहिले एकदमै गाह्रो थियो । पहिले भन्दा अहिले धेरै सजिलो त भएको छ, तरपनि सहजै अनलाइन भुक्तानीमा ल्याउन गाह्रै छ । पहिलोपटक आउन लागेकाहरूलाई यो कस्तो हुने हो, के हो भन्ने खालको आशंका हुन्छन् । जसले गरिरहेका छन् उनीहरूले यसको मज्जा र फाइदा बुझिसके । उनीहरू यसलाई अझ कसरी बढाउने होला, सबैलाई अनलाइनमै ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने महशुस भइरहेको छ । जस्तो इन्टरनेट आइएसपीहरूलाई इसेवाबाट शुल्क भुक्तानी तिर्नेको संख्या हेर्दा अझ बढाउन पाए हुन्थो, काउन्टरको संख्या घटाएर सबैलाई अनलाइनमै ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ ।
बत्तीको पनि यो सबैले इसेवाबाट तिरिदिए हुन्थ्यो भन्ने भएको छ र त्यसलाई प्रोत्साहन पनि गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूले काउन्टरको खर्च घटाउन लागिरहनुभएको छ । अन्य जो बिजनेसहरू जोडिन बाँकी छ उहाँहरूलाई पनि कसरी गर्ने होला भन्ने एउटा पाटो छ भने अर्को पारदर्शीता । कतिपयलाई यसबाट गरेपछि खातामा देखिन्छ, सबै पारदर्शी हुन्छ भन्ने पाटो पनि छ । तर पहिलेको तुलनामा धेरै परिवर्तन भएको छ । अहिले इसेवा राखौँ भन्दा राख्दैनौ भन्ने जवाफ आउँदैन, बरु कसरी राख्ने, कसरी स्थापित बनाउने भन्ने जिज्ञासा पाउँछौ ।
सुरूमा अनलाइन जाऔँ भन्दा नपत्याएका अथवा नपत्याएर वास्तै नगरेका तथा गिज्याएर फर्काएका कुनै घटना छन् ?
(हाँस्दै).. .त्यस्ता त कति छन् कति । रेकर्डमा सबैको नाम भनेर पनि संभव छैन । त्यो बेलामा हामीलाई यी केटाहरू एकदमै महत्वाकांक्षी भए । यो सानो कम्पनीले के नै गर्न सक्छ र भनेर सोँचेका धेरै थिए । हाम्रो अगाडी सिधै नभए पनि तीन–चारजना भूराहरू छन् भर्खरै इञ्जीनियरिङ पढेका, के–के न गर्छु भनेर आउँछन्, गफै दिएर जान्छन् भन्ने प्रतिक्रिया धेरै सुनिन्थ्यो । हाम्रै अगाडी कसैले नभने पनि विभिन्न माध्यमबाट त्यो सुन्थ्यौँ । यो नहुने काम हो, यो नगर भन्ने पनि थिए ।
त्यतिखेर आफ्नो मनमा ठुलो सपना, तर बाहिर भने नपत्याएको अवस्था, अहिलेको १० वर्षको अवधिको सफलता हेर्दा कस्तो महशुस हुन्छ ?
हामीले सोचेकै रफ्तारमा त अहिले पनि भएको छैन । तर जुन सुरू गर्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरी चाहीँ हामीले एकदशमा ठुलै काम गर्न सकेका हौँ भन्ने हुन्छ । त्यतिखेर एकदुई जनाको उदेश्य थियो, यसो गर्नुपर्छ भनेर । तर त्यो चिजचाहीँ मार्केटले डिमान्ड गर्यो, रेगुलेटरले महशुस गर्यो रेगुलेशनका लागि । जसले गर्दा आज यो क्षेत्र एउटा इन्डष्ट्रीका रूपमा अगाडी बढेको छ । आजको दिनमा नेपालमा भुक्तानी भन्ने कुरा एउटा उद्योगको रूपमा विकास भयो । आजको दिनमा इसेवा एक्लो छैन मार्केटमा नियमन गर्नुपर्छ भनेर रेगुलेटर आयो । अन्य विग पकेटका प्लेयरहरू अब यो इन्डष्टी«जमा काम गर्नुपर्छ भनेर आए ।
लाइसेन्सकै कुरा गर्ने हो भने अहिले डेढ– दुई सय कम्पनी पाइपलाइनमा छन् । सरकारले डिजिटलाइजेशन भनेर डिजिटल नेपालकै फ्रेमवर्क बनाइरहेको छ । यो सबै हेर्दा एकदुई जनाले सुरू गरेको चिज आजको दिनमा मार्केट, सोसाइटी र राज्यले एसेप्ट गर्यो र एउटा उद्योग बन्न पुग्यो । इन्डष्ट्री त बन्योे तर यो इन्डष्ट्रीले आजको दिनमा धेरै डेलिभरी भने गर्न सकेको छैन । किनभने ओभरल कारोबार हेर्ने हो भने त डिजिटल ट्रान्जेक्सन दुई–तीन प्रतिशत मात्र छ । अधिकतम भए ५ प्रतिशत होला । अहिले पनि ९५ प्रतिशत भन्दा बढि कारोबार त क्यासमै भइरहेको छ । क्यासलाई हामीले कम्तिमा ५० देखि ६० प्रतिशतमा परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने बल्ल सपना पुरा भयो भन्ने हुन्छ । दश वर्ष अगाडी र आजको दिनको तुलना गर्ने हो भने त हामीले निकै नै राम्रो काम गरेको हो, नगरेको होइन । अरुले भन्दा धेरै नै राम्रो गरेको हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि अझै धेरै गर्न बाँकी छ । हामीले ५ प्रतिशतभन्दा कम कारोबारलाई मात्र डिजिटलाइन गर्न सक्यौँ ।
हामीले अहिले सबैभन्दा ठुलो काम गरेको भनेको यो क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न सफल भयौँ । पहिले हामीलाई यी भूराहरूले के गर्नसक्छन् भन्ने थियो भने आजका दिनमा नेपालमा भएभरका पैसा भएका मानिस यो फिल्डमा नआए हामी टिक्दैनौ भन्ने महशुस गरेर सबैले आफ्ना–आफ्ना एउटा पे निकाले । त्यो दिनदेखि यो दिनसम्मको फुल क्रेडिट लिने चाहीँ हामी हो । नेपालमा पेमेन्ट बिजनेस गरेर, डिजिटल बिजनेस गरेर मज्जाले सस्टेन हुन्छ, यो ठुलै मार्केट हो भनेर मार्केट क्रियट गरेर प्रुफ गर्यौँ । अहिले आएर अन्य प्लेयरहरू आए । हामीले यो दश वर्षमा गरेको एउटा उपलब्धी भनेको एउटा स्टार्ट अपलाई उद्योगका रूपमा स्थापित गरायौँ ।
सुरुमा त अनलाइनबाट बिल भुक्तानी गर्ने भनेर सूरु भएको थियो, तर इसेवा सफल हुनुको टर्निङ पोइन्ट भने कहाँनिर बन्यो ?
कस्तो थियो भने हामीले पहिले सुरू गर्दा मोबाईलबाट रकम तिर्ने भन्ने सोँच थिएन । इन्टरनेटबाट तिर्ने भन्ने थियो । किनकी त्यतिबेला नेपालमा मोबाईल छ्यापछ्याप्ती भएको पनि थिएन । मोबाईलमा इन्टरनेटहरू केही थिएन । मोबाईलमा एसएमएसबाट गर्न मिल्छ भनेर हामीले २००८÷००९ तिरै हो सोँचेको । तर मोबाईलबाट भन्दा पनि इन्टरनेटबाट तिर्ने भन्ने सोँचबाट सुरू भएको हो । तर मोबाईलले यतिछिटो मार्केट लियो की इन्टरनेटबाट मोबाईलमा यति छिटै स्विच भयो की हाम्रो एउटा टर्निङ पोइन्ट भनेको समाज मोबाईलमा जाँदैछ भन्ने समयमै पत्ता लगाउन सक्यौँ । मोबाईलबाट पनि कारोबार गर्न मिल्ने प्रविधी समयमै विकास गर्यौँ । मोबाईल आउँदैछ भन्ने भएपछि समयमै हाम्रो प्रोडक्ट रेडी भयो ।
अर्को टर्निङ पोइन्ट भनेको हामीले २००९ मा अनलाइन बसीबसी बत्तीको बिल तिर्ने सर्भिस बनाएपछि तथा अनलाइनबाटै रिचार्ज गर्ने प्रविधि बनाएपछि त धमाधम अनलाइनबाट तिर्लान् भन्ने थियो । कारोबार धमाधम होला भन्ने सोँच थियो । तर त्यो भएन । २००९ देखि २०१२ सम्म सोँचेजस्तो ग्राहकहरूले एडप्ट गरेनन् । हामी त्यति ग्राहकबाट सस्टेन हुँदैनथ्यौँ, त्यसलाई मात्र फोकस गरेको भए । तर, हामीले त्यतिबेला साढे दुई करोड जनसंख्यालाई इसेवा चलाउन सिकाउन भन्दा एउटा–एउटा ठाउँमा एक÷एक जना मानिसलाई इसेवा चलाउन सिकाउँदा त्यसले हामीलाई छिटो रिजल्ट आउँछ भन्ने लाग्यो र एजेन्ट मोडलमा गयौँ । एजेन्ट मोडल पनी हाम्रो अर्को ठुलो टर्निङ पोइन्ट भयो । जुन हामीले २०१२ मा सुरू गर्यौँ ।
एजेन्टहरूलाई हाम्रा सेवाको आफ्नो ठाउँबाट सेवा दिनका लागि ल्याएपछि धेरै मानिसले हाम्रो सर्भिस प्रत्यक्ष नलिएपनि अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै जोडिए ।
अहिले त रियल टाइममा सबै कारोबार हुन्छ , तर त्यतिबेला सेवा प्रदायक पनि डिजिटलाइज भइसकेका थिएनन् । तपाईहरुले इसेवाबाट यसरी तिर्न सकिन्छ भनेर देखाउन, अझ भनौ न बानी बसाल्न के–के गर्नुभयो ?
सबै कुरा अनलाइन हुनुपर्छ भन्ने सोँच हाम्रो हो । तर त्यतिबेला न टेलिकमसँग अनलाइन पैसा तिर्ने सिस्टम थियो, न बत्तिको बिल तिर्नका लागि प्राधिकरणसँग सिस्टम थियो । उनीहरूसँग सिस्टम थिएन, हामीलाई अनलाइन गर्नुपर्ने थियो । हामीले त्यतिबेला अनलाइन हुन्छ भनेर पु्रफ गर्नलाई पनि एनटिसीले बजारमा पठाएका रिचार्जकार्ड किन्नुपर्यो । हामीले एकैपटक हजार, दुईहजार रिचार्जकार्ड किनेर ल्याउने, दुई चारजना मानिस राखेर घोट्ने, अनि त्यहि रिचार्जकार्डको पिन अनलाइनमा राखेर बेच्थ्यौँ । बत्तीको बिल पनि त्यस्तै । प्राधिकरणसँग सिस्टम थिएन । हामीले दिनभर बत्तीको बिल कलेक्ट गर्ने, भोलिपल्ट मानिसलाई प्राधिकरणमा लाइन लगाएर तिरिदिने गथ्र्यौँ । त्यो चाहीँ मानिसलाइ बानी बसाल्न भन्दा पनि यो अनलाइन गर्न मिल्ने कुरा हो भनेर पु्रफ गर्न गरेका थियौँ । ग्राहकको साइडमा समस्या छैन, समस्या सेवा प्रदायकमा छ भनेर देखाउनका लागि पनि त्यो गरेका हौँ । त्यसका लागि ब्याकेन्ट सपोर्ट नभएपनि ग्राहकले हेर्दा अनलाइन भइरहेको छ भन्ने पार्नका लागि गरेका हौँ ।
अहिले इसेवाको सेवा नेपालभर पुगेको छ । त्यतिबेला तपाईहरूको सोँच शहरी क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी होला की ग्रामणि भेगमा भन्ने थियो ?अहिले यो कुन क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी भएको छ ?
हामीलाई सुरुमा शहरी क्षेत्रमै प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लागेको थियो । इन्टरनेट सर्भिस शहरी क्षेत्रमै थियो । गाउँमा मोबाईल नै त्यति थिएन । मोबाईलबाट कसरी कारोबार गर्लान् र जस्तो लागेको थियो । तर हाम्रो त्यो सोँच कहिले परिवर्नन भयो भने हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मोबाईल बैंक हालेपछि हुम्ला जुम्लामा रिचार्जकार्ड बिक्न छाडेर हाम्रो ट्रान्जेक्सन बढ्यो ।
हामीले हुम्ला, जुम्लामा किन धेरै कारोबार हुन थाल्यो भनेर हेर्यौँ । त्यहाँ त कस्तो रहेछ भने, जुम्लाको मान्छे नेपालगञ्ज आउने, नेपालगञ्ज आएर धेरै मात्रामा रिचार्ज कार्ड किन्ने । अनि खच्चडमा बोकाउने, हेलिकप्टरमा लैजाने गर्दा रहेछन् । उसले सय, दुईसय, पाँचसय र हजारको रिचार्ज कार्ड लैजाँदो रहेछ । तर गाउँमा सय र दुईसयका रिचार्ज कार्ड बिक्ने तर पाँच सय र हजारको रिचार्ज कार्ड बिक्नै गाह«ो हुने । जसले गर्दा उनीहरूको रकम अड्कीने हुदो रहेछ ।जब हामीले वाणिज्यमा मोबाईल बैंक राखेपछि त मोबाईलबाटै रिचार्ज, टपअप गर्न मिल्ने भयो । त्यसमा हामीले २ प्रतिशत क्यासब्याक पनि दिएका थियौँ ।
खच्चड र हेलिकप्टरको खर्च पनि घट्यो । नेपालगञ्जबाट लैजाँदा पनि त्यही २ प्रतिशत, मोबाईलबाट पनि त्यही । मानिसले नेपालगञ्जबाट रिचार्जकार्ड लैजानै छाडे । यसले गर्दा ५ सय हजारका रिचार्जकार्ड पनि नअड्कीने । यो देखेपछि हामीले बनाउन त शहरलाई हेरेर बनायौँ, तर प्रभावकारी त गाउँमै रहेछ भन्ने सोँच आयो ।
अर्कोकुरा जस्तो आजको दिनमा रिचार्जकार्डहरु शहरी भेगमा त पसल पसलमा छन् नी । शहरमा मुभिको टिकट काट्न अथवा इन्टरनेटको बिल भुक्तानीका लागि इसेवा चलाउँछ होला । शहरमा रिचार्ज कार्ड त दुई पाइला हिड्दा पाइन्छ । यसले शहरका मानिसलाई रिचार्ज कार्ड मोबाईलबाट गर्ने बानी अलि पछि आयो । तर ग्रामिण भेगमा त रिचार्जकार्ड किन्न पनि धेरै टाढा जानुपर्ने । आजको दिनमा इसेवा हेर्दा इसेवा चलाउनेको संख्या हेर्दा ४० प्रतिशत शहरी भेगमा छ भने बाँकी ६० प्रतिशत त सेमी अर्बन एरियामा छ । जहाँ रिचार्जकार्ड लिन एक डेढ घण्टाको बस चढेर जानुपर्छ, जहाँ बत्तीको बिल तिर्न टाढा जानुपर्छ । त्यस्तो ठाउँहरुमा चाहीँ मानिसले मज्जाले चलाइरहेका छन् ।
अर्कोकुरा एजेन्ट मोडलबाट हामीलाई के भो भने बत्तिको बिल तिर्न घन्टौ हिडेर अथवा बस चढेर सदरमुकाम जानुपर्छ । हामीले गाउँको सबैलाई इसेवा चलाउ भन्नै परेन । गाउँको एउटाले इसेवा चलाउन जान्यो भने उसले गाउँभरिकै तिरिदिन सक्नेभयो । त्यसले गर्दा हामीलाई गाउँमा सेवा स्थापित गर्न एकदमै सहज भयो ।
इसेवाले यो बीचमा स्काइ हाइट भन्छन् नि अर्थात् एक्कासी पिकअप लिएको कहिलेदेखि हो ?
२००९ देखि २०१२ सम्म इसेवा एफवानसफ्टको एउटा प्रोडक्टको रूपमा थियो । हामीले २०१२ मा कम्पनी छुट्यायौँ । २०१३ मा एजेन्ट मोडलमा गयौँ । जुन बेलामा हामी एजेन्ट मोडलमा गयौँ, त्यसपछि गाउँ गाउँमा इसेवा छिर्यो । गाउँमा इसेवा राम्रोसँग छिरेको भनेको २०१४ मा हो, यो अहिले पनि जारी छ । तपाईले भनेजस्तो स्काइ हाइट लिएको भनेको २०१५ मा हो । २०१५ नै आम्रो टर्निङ पोइन्ट हो ।
तपाईहरूको पहिलो मर्चेन्ट कुन हो ? सुरूमा अनलाइनमा ल्याउन कसरी सहमत गराउनुभयो ?
हाम्रो पहिलो मर्चेन्ट बुद्ध एयर हो । बिजनेसको भिजन भनेको यस्तो हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण पनि हो । हामीलाई कसैले नपत्याइरहेको अवस्थामा बुद्ध एयरका विरेन्द्र सरले बुद्ध एयरको टिकट अनलाइन गर्नुपर्छ भनिरहनुहुन्थ्यो । हामीले इसेवा बनाउँछौ, अनलाइनबाट टिकट काट्न सकिन्छ भन्दा उहाँले सहजै स्विकार मात्रै गर्नुभएन हामीलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभयो । बुद्धएयर पैसा हालेर मर्चेन्ट भएको हो । हामीलाई अनलाइन टिकट काट्ने सिस्टम बनाउ भनेर बुद्ध एयरले पैसा नै दिएको हो । हाम्रो पहिलो अफिसियल मर्नेन्ट भनेकै बुद्ध एयर हो । जसबाट हामीलाई निकै सहज भयो ।
यो दश वर्षमा त इसेवाले धेरै संघर्ष पनि गर्यो, एउटा उद्योगका रूपमा विकास पनि भयो । तर अहिले पेमेन्ट गेटवे कम्पनी आउने क्रम निकै बढेको छ । एक÷डेढ दर्जन कम्पनी आइसके भने कतिपय आउने क्रममा पनि छन् । अब मार्केट कस्तो होला, ठुलो मात्राको क्यास डिजिटलाइज होला की आपसमा अस्वस्थ प्रतिपर्धा होला ?
सबैजना बिजनेस गर्न आएको हो । सबैले आ–आफ्नो बिजनेस राम्रो होस् भन्ने नै सोचाइ हुन्छ । यसलाई अस्वस्थ प्रतिश्पर्धा भन्न मिलेन । मार्केटमा अवसर सबैले पाउँछन् र पाउनुपर्छ पनि । मार्केट हाम्रो पनि बिर्ता होइन भने अर्काको पनि होइन । जसले राम्रो सेवा दिन्छ, जसले धेरै सेवा दिन्छ उसैको चलाउने हो । हामीले सबैलाई भनेको चाहीँ, अहिले आपसमा भिडेर, कमिशनमा खेलेर, एजेन्ट तानातान गरेर यो मार्केट माथि जाँदैन ।
बल्ल २÷३ प्रतिशत क्यासलाई डिजिटलाइज गरेर खेलिरहेका छौँ भने ९७ प्रतिशत मार्केट त अहिले पनि क्यास नै छ नि ।
एउटा एउटा सेग्मेन्ट गरेर क्यासलाई घटाउँ भन्ने हो हाम्रो । जस्तो अहिले हामीले फोन पे भनेर ल्यायौँ । हामीलाई जहिल्यै पनि के प्रश्न आउँथ्यो भने तिमीहरू मोबाईलबाट टिकट काट्ने या भुक्तानी गर्ने बनाए पनि किराना पसलमा चामल किन्दा त मिल्दैन नि भन्थे । सुपरमार्केटमा त मिल्दैन भनेर प्रश्न गर्थे । त्यसलाई हामीले च्यालेञ्जको रूपमा लियौँ । अहिले आएर फोनपे तथा क्यूआरबाट सानो सानो कारोबार पनि मोबाईलबाट भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । आज केही नभएपनि फोन पे बाट हरेक दिन केही करोड रूपैयाँ कारोबार हुन्छ । हामीले मात्र फोनपेबाट दैनिक केही करोड रकमलाई डिजिटलाइज गर्न सक्यौँ, यो बढाउँदै लैजाने हो । अन्य पनि थुपै्र क्षेत्र छन् जसलाई क्यासलेस बनाउन सकिन्छ । सबैजना मिलेर धेरै भन्दा धेरै क्यास युज हुने ठाउँमा जाऔँ ।
यहाँ मार्केटमा अझ कति धेरै प्लेयरलाई ठाउँ छ नि । हामी २/३ प्रतिशतमा त सस्टेन भएका छौँ भने त बाँकी ९७ प्रतिशतले त धेरै प्लेयरलाई सस्टेन गर्छ । तर यही २÷३ प्रतिशतमा बाँडीचुँडी खाने भन्ने हो भने कोही पनि बाँच्दैन । त्यसकारण प्लेयर धेरै आउन, मार्केटमा इन्भेष्ट गरून् । धेरै भन्दा धेरैले यो चलाउन् ।आजको दिनमा मानिसलाई मोबाईलबाट पैसा तिर्न सिकाउने ठुलो कुरा हो । एकपटक पैसा तिर्न सिकेपछि कुन राम्रो छ भनेर त उसैले छुट्याइहाल्छ नि, भोलिका दिनमा ।
अहिलेसम्म त विभिन्न उतारचढावसहित यहाँसम्म आउनुभयो ? आगामी दिनमा डिजिटल मार्केटका चुनौतीहरू के–के हुन् ?
अहिलेको पार्टमा हेर्दा यो चिज चाहिने रहेछ है बजारमा भनेर रेगुलेटरले बुझ्यो । ग्राहकले पनि सहज भएकाले आवश्यकता महशुस गरिरहेका छन् । अझै पनि मर्चेन्टको पाटोमा त्यो लेबलमा आइसकेका छैनन् । यसलाई बैकल्पिक च्यानलकै रूमा हेरिरहेका छन् । डिजिटलपेमेन्ट मेरो मेनस्ट्रिम च्यानल हो भनेर बुझेको या महशुस गरेको अवस्था छैन । जस्तो नेपाल टेलिकममा हेर्यो भने प्राथमिकता रिचार्ज कार्डमा छ । कसरी यसलाई सिफ्ट गराउने भन्नेतर्फ ध्यान कम दिएको पाइन्छ । नेपालका व्यवसायीले नबुझेको अर्को के हो भने सर्विस डेलिवरीको च्यानल सहज हुनुपर्छ भन्ने छैन कि आफ्नो कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ भन्ने मात्र बुझेको अवस्था छ । सर्विस डेलिवरी गर्ने च्यानल आफ्नो कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ भन्ने छ । यो ओपन हुनुपर्छ, सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने छैन । सर्विस डेलभरीको च्यानललाई स्मुथ गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरुको ध्यान गए यसले छिटो टेकअप गर्छ ।
ठुलो कारोबार भएको, तर पेमेन्ट गेटवेमा आउन नसकेका क्षेत्रहरू छन् अहिले पनि ? कुन कुन हुन् ?
अर्गनाइज क्षेत्रमा त भयो । तर पूर्ण हुन सकेको छैन । जस्तो ठुलो ठुलो सुपरमार्केटमा कार्डबाट कारोबार त हुन्छ ,तर क्यास नै बढि हुन्छ । रेष्टुरेन्टमा पनि कार्डबाट कारोबार भएपनि धेरैजसो क्यास नै प्रयोग हुन्छ । हाम्रो देशमा डिजिटल भन्दा क्यास नै बढि छ । कुनैपनि क्षेत्रमा क्यास भन्दा डिजिटल कारोबार बढि छ भन्ने छैन । हाम्रोमा भाटभटेनिमा कार्ड चल्छ तर मानिस अगाडीको एटिएमबाट क्यास झिक्छ । कुनैपनि क्षेत्रमा डिजिटल कारोबारले क्यासलाई जित्यो भन्ने अवस्था छैन । हरेकले डिजिटल कारोबारलाई बैकल्पिक च्यानलको रूमा हेरेका छन् । मेनस्ट्रिम च्यानल हाम्रो डिजिटल हो, हामी क्यास पनि स्विकार गछौँ भन्ने लेबलमा कुनैपनि मर्चेन्ट पुगेको छैन । सर्विस प्रोभाइडरहरु हरेक कुरामा आफ्नो कन्ट्रोल खोज्ने, अनलाइनमा जानै नखोज्ने परिपाटी छ । यसलाई चिर्न जरूरी छ र यो हाम्रो च्यालेन्ज हो । अन्य यातायात, सवारी लाइन्सेन्स् मालपोत लगायत ठुलो कारोबार हुने क्षेत्र पनि डिजिटलाइज हुन सकेको छैन । यी क्षेत्रमा अहिलेपनि लामो लाइन बसेर मानिसहरू सेवा लिइरहेको अवस्था छ । यी क्षेत्रलाई पनि डिजिटलाइज गर्नका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
अहिले त एजेन्ट मोडलमा काम गरिरहनुभएको छ । सबैले आ–अफैले इसेवा चलाउँदा त एजेन्टलाई घाटा हुँदैन र ?
हाम्रो बिजनेस मोडल यस्तो छ की हाम्रोमा सबै फिट हुन्छन् । सबैलाई फाइदा हुन्छ । एजेन्टको आम्दानी बढाइराख्न हामीले नयाँ नयाँ सेवा लिइरहेका छौँ, लिइरहनेछौँ । हामीले विभिन्न ठुला ठुला इभेन्ट पनि लिइरहेका छौँ । जसले एजेन्टलाई थप सबल बनाउनेछ । सबै सेवा ग्राहकले आफै गर्ने हुँदैन । अहिले हामीले बनाएको एजेन्ट नेटवर्क भनेको त डिष्ट्रिब्युसन नेटवर्क हो । यसमा आज टपअप घुमिरहेको छ । भोलि एयरलाइन्स् टिकट घुम्ला सर्विस यत्तिमात्र त होइन नि । मानिसलाई टपअप, बिजुली,एयरलाइन्स् मात्र त चाहिने त होइन । सर्विस त अनेक आइराख्छन् । यो डिष्ट्रिब्यूसन नेटवर्कलाई फिट हुने धेरै कुरा छन् । समयको मागसँगै आउँदै जान्छन् । भोलिको दिनमा टपअप ग्राहकले गर्ला तर एजेन्टका लागि नयाँ कुरा आउँछन् । लङटमका लागि इसेवाका एजेन्टलाई निरन्तर सर्विस आउँछन् । हामी हाम्रा एजेन्टलाई सस्टेन गराउन नयाँ नयाँ कुरा ल्याउँछौ । जस्तो अहिले हामीले बैंक खाता खोल्न सक्ने सेवा ल्याएका छौँ । यो किन भन्दा एजेन्टलाई सस्टेन गराउन हो । नाइभने बैंक खाता खोलाउन जरूरी थिएन नि । त्यस्तै इपिएस , साग लगायतका खेज जस्ता विभिन्न सर्ट इभेन्टहरु ल्याइरहेका छौँ । यसले एकातिर कष्टमरलाई सजिलो भइरहेको छ भने अर्कातिर एजेन्लाई पनि इन्गेजमेन्ट गराइरहेको छ । नयाँ नयाँ सेवाहरू बढ्दै जान्छ र आम्दानी पनि बढ्दै जान्छ ।
अहिले केही बैंक तथा संस्था पनि वालेट चलाउने भन्दै कस्सिरहेको देखिन्छ, यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ?
यस्तो हो, बैंकको बिजनेस आफ्नो छ हाम्रो बिजनेस हामी गरिरहेका छौँ ।उनीहरूले डिपोजिट गर्ने, ल्याण्डिङ गर्ने देखि थुप्रै बिजनेस गरिरहेका छन् । त्यमध्येको एउटा सानो कम्पोनेन्ट भनेको पेमेन्ट हो । हाम्रो मेन बिजनेस भनेको पेमेन्ट हो, बैंकिङ होइन । क्लियर रूपमा डिमार्केशन लाइन छ । बैंकले बैंकिङ गरेको छ हामीले हाम्रो बिजनेस गरेका छोँ । यसले गर्दा भोलिका दिनमा पनि हाम्रो बीचमा कुनै द्वन्द्व हुने अवस्था हुदैन आजको सन्दर्भमा भन्दा । कसैले लाइन क्रस गरेमा मात्र द्वन्द्व हुने हो । कुनै कुनै बैंकले आजको दिनमा इसेवालाई प्रतिश्पर्धीका रूपमा पनि हेर्छ । हाम्रो कुरा भनेको हामी कहिल्यै पनि बैंकको प्रतिश्पर्धी होइनौ । हामी बैंकका सहयोगी हौँ । हामीले उनीहरूलाई सहयोग नै गरिरहेका छौँ हरेक कुरामा । जस्तो आज इसेवाले बैंक खाता खोलिदिइरहेको छ । इसेवाको पैसा बैंकमा डिपोजिट छ । मानिसले किस्ता तिरेका छन् । क्रेडिट कार्डको रकम भुक्तानी गरेका छन् । हामीले डिपोजिट कलेक्ट गर्ने होइन, हामीले ल्याण्डिङ गर्ने होइन भनेपछि त हाम्रो उदेश्य नै फरक छ नि । त्यसैले हामीले आ–आफ्नो बिजनेस गरौँ भन्ने हो ।
अन्त्यमा, अहिले मुलुक संघीयतामा गएको अवस्था छ । स्थानीय सरकारले पनि धमाधम आफ्नो काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमका ठुला कारोबार भइरहेका छन् । कुनै स्थानीय निकायलाई डिजिटल कारोबारका लागि नमुना पनि बनाउनेगरी काम गर्न सकिन्थ्यो होला नि ?
सकिन्छ, एकदमै हामी त्यो तयारी गरिरहेका छौँ । केही स्थानीय तह निकट भविष्यमै नमुनाकै रूपमा विकास हुनेछन् ।